Ụlọ | Gamelanders.com
Onye Mmekọ & Enyi
Projects ke ebe a
Nabata ndị Gamelanders nke ezinụlọ egwuregwu.
N’ikpeazụ anyị nwere ike iji nganga kwuo
"Lee anyị bụ egwuregwu na"
Anyị na-ele anya ịnabatacha gị ebe anyị nọ
bụrụ ndị na-eso ụzọ ọhụụ, ndị mbipụta akwụkwọ, ndị enyi na ndị mmekọ
ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ furu efu ka anyị.
Anyị ga-achọ ịkọwa ọzọ na ha niile
Nyocha naanị naanị ahụmịhe onwe anyị, mmetụta na echiche anyị
Enwere m olileanya na ị ga-anọnyere anyị nke ọma.
O buru na ichoro ide anyi
You nwere ike iru anyị n'oge ọ bụla n'okpuru Kpọtụrụ.
Anyị na-azụta ma gbazite na ...
Nyocha anyị kachasị ọhụrụ
6. December 2021	Enweghị asịsa
1 - Ndị egwuregwu 4 30 min, afọ 10+ Onye ode akwụkwọ: Rôla & Onye na-ese foto: Marina Costa Onye nkwusa: HUCH! Ihe egwuregwu Sylex:  4.6 / 5 Ihe na-atọ ụtọ:  4.8 / 5
Gaa n'ihu Ọgụgụ "
22. November 2021	Okwu 1
Anyị na-emepụta egwuregwu site na ibe n'ibe, bytes na kaadiboodu. Weta egwuregwu anyị na tebụl gị, ekwentị gị na kọmputa gị mgbe ọ bụla ezinụlọ gị na ndị enyi gị na-egwu egwu
Esemokwu na ngere
22. November 2021	Enweghị asịsa
Ndị na-egwu egwuregwu 2 - 4 ihe dị ka 25 min site na afọ 10 Onye edemede: Sebastian Marwecki Onye na-ese ihe: Miguel Fernandez Onye nkwusa: Egwuregwu Bombasta Ihe na-atọ ụtọ:  5/5 Ntụgharị uru:  4.8.
Nraranye n'ulo n'ugwu
31. October 2021	Enweghị asịsa
Ndị egwuregwu 3 - 6 ihe dịka 40 + sitere na 12 + Onye ode akwụkwọ: Bruce Glassco Rob Daviau Onye na-ese ihe: Dennis Crabapple McClain Christopher Moeller Peter Whitley Onye nkwusa: Asmodee
Ọnwụ Cthulhu nwere ike ịnwụ
29. October 2021	Enweghị asịsa
Ndị egwuregwu 1 - 5 ihe dịka. 90 min si 12+ Onye ode akwụkwọ: Rob Daviau Eric M. Lang Onye na-ese ihe: Adrian Smith Karl Kopinski Nicolas FructusRichard WrightFilipe Pagliuso Onye nkwusa: CMON
Ugwu nke ara
28. October 2021	Enweghị asịsa
Ndị egwuregwu 3 - 5 ihe dịka. 60 min sitere na 12+ odee: Rob Daviau Onye na-ese ihe: Miguel Coimbra Onye nkwusa: HUCH! Ihe egwuregwu IELLO: 4.5/5 ihe na-atọ ụtọ:  4.7 / 5
Anyị isiokwu ụwa
Ntụle anyị kachasị elu
Sabrina & Hanno na-atọrọ gị kwa izu site na iji akụkọ, iji ya na kaadị, dais ma ọ bụ egwuregwu bọọdụ.
Rita Modl na Alexander Koppin nwee egwuregwu bọọlụ n’ime pọdkastị ha. Ha na-egwu egwuregwu dị mkpirikpi nke jikọtara egwuregwu bọọdụ n'ụdị ụfọdụ. Nwee ọchịchọ ịmata ihe!
Nabata na ezinụlọ egwuregwu
0 / 5	(Nyocha 0)
Keywords na-ewu ewu
Ndị egwuregwu 2-4 24 site na afọ 12 14 App dabeere egwuregwu 8 board game 33 Egwuregwu Board 26 ndọtị 15 Egwuregwu ezinụlọ 30 Egwuregwu ezinụlọ 16 Chei! 18 kaadị egwuregwu 8 kaadị Games 16 miniatures 14
Ọwa Twitch anyị
Ihe E Mere Mpụ
Rajas nke ndị Ganges
ịzụ ahịa Queen
Ndị egwuregwu Gear
E-Mail na adreesị:
Ọ bụrụ na ị bụ mmadụ, hapụ mpaghara oghere:
Onye gosipụtara ya WordPress. Foodica WordPress isiokwu site WPZOOM.